Batisa teny Andranotapahina 24 febroary 2012 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
29 février 2012 admin boky apokalypsy, febroary
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana Apokalypsy Antananarivo ny sabata 24 Febroary 2012 lasa teo. Tao aorian’ny kaoferansa lehibe nataon’ny pasitera Mailhol dia maro be ireo niroso tamin’ny ranon’ny batisa. Tao aorian’ny kaoferansa lehibe izay notanterahina tetsy amin’ny foibe ny fiangonana Apokalypsy Ambodinisotry, dia olona 308 no nanapak’evitra ny hiroso tamin’ny batisa. Tetsy Andranotapahina Ambohidratrimo no nanatontosana izany batisa izany ny sabata 24 Febroary 2012 lasa teo. Mialohan’ny nirosoana tamin’ny fanaovana batisa azy 308 mianadahy anefa dia tsy nohadinoin’ny pasitera Mailhol ny nizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpino maro be tonga teny an-toerana. Notsoahina tao amin’ny Matio 22: 8-14 sy Apokalypsy 11: 1-2 izany tenin’Andriamanitra izany.
Nivoitra tamin’io fotoana io ny amin’ny fanetren-tena satria raha tsy manetry tena isika hoy ny pasitera Mailhol tsy hahavita hanolo ny fitafiana amin’ny alalan’ny batisa. Maro tamin’ireo olona vita batisa tamin’io fotoana io no afaka tamin’ny fatoran’ny zava-mahadomelina, teo ihany koa no sitrana tamin’ny aretiny, ary indrindra ny afaka tamin’ny fatoran’ny devoly sy ny fanahy maloto. Tamin’ny fotoana tapany hariva kosa dia nizara ny fahefana ho azy ireo ny pasitera Mailhol, ary nisy ny toromarika nomeny mialoha izay fizarana fahefana izay.
Ampahatsiahivina hatrany isika fa mbola mitohy ny fampianarana ny boky Apokalypsy amin’ireo Radio Fanambarana eto Madagasikara. Ho an’ny fampianarana ao amin’ny radio Fanambarana Antananarivo dia eo amin’ny toko faha 11 ny fanazavana amin’izao fotoana izao. Ao anatin’izay ny fandrefesana ny tempoly izay ahitana ny fanahy masina sy ny nahafatesan’i Jesosy izay mbola miteraka ady hevitra be ho an’ny maro. Mbola mitohy hatrany izay fampianarana izay ary marihina fa raha tsy naharaka hatramin’ny voalohany dia tsy tsara intsony ny mihaino azy satria efa miditra lalindalina ny fanazavana ka mety tsy ho araka intsony.
← Apokalypsy Antohibe Ambohidratrimo
Faha 10 taona ny FAM Toliara →